नाङ्गो शरीर र खुल्ला यौन प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा, आधुनिकता कि विकृति ? - Everest Dainik - News from Nepal
नाङ्गो शरीर र खुल्ला यौन प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा, आधुनिकता कि विकृति ?
निश्चल दाहाल। मानिस प्राकृतिक रुपमा नै स्वतन्त्र हो, जसरी आकाशमा उड्ने चरिलाइ स्वतन्त्र भनी उदाहरण दिइन्छ। स्वतन्त्रता तर परिधीबिहिन भने हुदैन । हरेक कुराको कहि न कहि सिमा कोरिएको अवश्य नै हुन्छ । बरु कहिले सिमा देख्न नसकिएला या सिमा नाघिसकेको अवस्थामा त्यसकाे नकारात्मक प्रभावले ज्या है! मैले सिमा नाघेछु भनेर महशुस गरिएला।
सिमा कसरी तोकिन्छ त ? के हो सिमा ?
हामी आफु बस्ने स्थान, देशको स्थापित मूल्य मान्यतालाई तु का तु परिवर्तन त गर्न सक्दैनौ, कालान्तरमा धेरै प्रयासपछि केही बदलावहरु बिस्तारै आउदै भने जान्छन् । हो त्यही मान्यताहरु जसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न र जसकाे परिधिमा रहनुपर्छ ति सिमा हुन।
भर्खर नै सामाजिक संजालहरु काण्ड-काण्डको नामले चर्चामा आए। पार्किङ्ग काण्ड, जापान काण्ड, खेत काण्ड, होटल काण्ड, भाउजू काण्ड आदि। यी सबै काण्डमा समानता भने एकै थियो कि हर यी सबमा युवा युवती बिचको यौन सम्पर्कको भिडियो बनाइएको थियो र त्यस्लाइ कुनै न कुनै तरिकाले भाइरल बनाइयो।
स्वतन्त्रताको कुरा गरि रहदा, आधुनिकीकरणको गलत उदाहरणलाई लिएर पनि हामी हिड्ने गरेका छौ। गलत यो मानेमा कि स्थापित मान्यता भन्दा धेरै पृथक भएकोले। हुन त my body my wish , my stuffs my right (मेरो शरीर मेरि इच्छा, मेरा सामान मेरा अधिकार ) यो नारा लिएर अहिलेको युवा पुस्ता आफुलाई आधुनिकिकरणको सवारिमा हुइक्याउदै छ। स्वतन्त्रता स्वघोषित आधुनिकिकरणसँग दाजिएको छ।
भर्खर नै सामाजिक संजालहरु काण्ड-काण्डको नामले चर्चामा आए। पार्किङ्ग काण्ड, जापान काण्ड, खेत काण्ड, होटल काण्ड, भाउजू काण्ड आदि । यी सबै काण्डमा समानता भने एकै थियो कि हर यी सबमा युवा युवती बिचको यौन सम्पर्कको भिडियो बनाइएको थियो र त्यस्लाइ कुनै न कुनै तरिकाले भाइरल बनाइयो। यी यस्ता हर्कतले कति सम्म असर गर्छ त, या यी आधुनिकीकरणको नव मार्ग हो ? चर्चा गरौ।
रेस्लिङ सुपरस्टार बेलायती मुलकी पेज को सेक्सटेप पनि निकै भाइरल भयो, त्यो ह्याक गरि अप्लोड गरिएको भन्ने हल्ला छ, हङ्गर गेम्स चलचित्रकी नायिका जेनिफरको पनि नग्न तस्बिरहरु भाइरल भएका हुन्।
प्रसङ्ग जोडौ यौनिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्रता । हलिउड, बलिउडका धेरै चर्चित अनुहारहरुले आफुलाई स्थापित गराउन नग्न भिडियो बनाई या सेक्सटेप बनाई ईन्टरनेटमा छरेर सफलता नपाएका हैनन। जस्तो अमेरिकि रियालिटि स्टार किम कार्डासिएनले आफ्नो सेक्सटेप बाट ४.५ मिलियन डलर कमाएको र उत्तिनै चर्चा बटुलेको खबर छरपस्ट छ।
रेस्लिङ सुपरस्टार बेलायती मुलकी पेज को सेक्सटेप पनि निकै भाइरल भयो, त्यो ह्याक गरि अप्लोड गरिएको भन्ने हल्ला छ, हङ्गर गेम्स चलचित्रकी नायिका जेनिफरको पनि नग्न तस्बिरहरु भाइरल भएका हुन्। बलिउड स्टार कट्रीना केफकी बहिनिको पनि सेक्सटेप बाहिर न आएको हैन, त्यस्तै नेपाली नायिका श्रेष्ठको पनि रसलिलाको भिडियो सार्वजनिक छ।
याे पनि पढ्नुस शिक्षामा गुणस्तर र आधुनिकरणका लागि गाउँ गाउँमा फ्रि वाईफाई !!
यस्ता सूचीहरु अथाह छन। के यी सब रिलिज स्वइच्छाले गरिएको थियो त ? या बास्तवमा नै ह्याक गरिएका हुन ? ती तर्कका कुरा होलान । तर, यी सबैको समानता के थियो भने ती सेक्सटेप को कारण ती युवती हरुको चर्चा चुलियो । त्यस्मा संलग्न पुरुषहरुको नाम महिलाको झै त्यति चर्चामा भने रहेको छैन ।
यसबाट अझ पनि समाजले नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बुझ्न सकिन्छ । खैर नारिवाद र पुरुषवादका कुरा भिन्न कुनै लेखमा गरौला तर यहाँ बढ्दो सेक्स टेपको माहामारी र यस्को असरको चर्चा गरौ ।
नेपाली परिधिमा हामिलाई साघुर्याएर यो बिषयको चर्चा गरौ। सेक्सटेप नै नभए पनि; हाम्रो समाजले अश्लील बिल्ला भिराएको धेरै भिडियो सार्वजनिक गरेर, धेरै मोडल गायिका तथा नायिकाहरुले चर्चा बटुलेका छन्।
किन बनाइन्छ सेक्सटेप, माथि भने झै स्वतन्त्रताको कुरा जोडौ। आफुले सन्तुष्टि लिने कुरामा तौरतरिका छान्ने मानिसको ब्याक्तिगत स्वतन्त्रता होला तथापि त्यस्मा पनि निम्न यी कारणहरु हुन सक्छन सेक्स टेप बन्न मा-
१- कुनै जोडिलाई स्क्रिनमा आफ्नो रसलिला हेर्न रमाइलो लाग्नुले सेक्स टेप बनाउलान्।
२- प्रेमी-प्रेमिका बिचमा भौगोलिक दुरि छ भने एक अर्काको यौन सन्तुष्टिको लागि नग्न भिडियो बनाई शेयर गर्नु। जुन सेक्सटेप कहलिन्छ।
३- आफुलाई चर्चामा ल्याउन (नव आकर्षण) टेप बनाउनु।
४- पुराना सेलेब्रीटिको नक्कल गरि सेक्स्टेप बनाउनु।
५- सम्बन्धको धरौटी (त्यो पछि एकले अर्कालाई छोड्न अफ्टेरो हुनु) को लागि सेक्स्टेप बनाउनु।
६- जबर्जस्ति करणीका भिडियो, पछि सेक्स्टेप भनी निकालिनु।
७- अन्जानमा, लुकाएर भिडियो खिचिनु अनि सेक्सटेप भनिनु।
८- साथिभाई बिचमा आफुलाई उच्च देखाउन (भिडियो देखाई आफ्नो पुरुषार्थ प्रदर्शन गर्ने) आदि लगायत विभिन्न अन्य कारणहरु हुन सक्छन्।
नेपाली परिधिमा हामिलाई साघुर्याएर यो बिषयको चर्चा गरौ। सेक्सटेप नै नभए पनि; हाम्रो समाजले अश्लील बिल्ला भिराएको धेरै भिडियो सार्वजनिक गरेर, धेरै मोडल गायिका तथा नायिकाहरुले चर्चा बटुलेका छन। मनग्य दाम पनि कमाएका छन। भारतिय मुलकी सन्नी लिओन बाट प्रभावित भएर एक नेपालि स्कुले युवतिले हस्तमैथुन गर्दै गरेको भिडियो हरु बनाएर हदै सम्म चर्चा बटुलिन। उनका भिडियो हरुमा लाखौ लाखको भिउज छन।
के यस्तै क्षणिक चर्चा बटुल्न युवायुवतीहरु उत्तेजित भइ सेक्स्टेप बनाउन लागि परेका हुन त ?
अहिले फेसबुकमा कलेज पढ्ने धेरै युवा युवतिहरुको ग्रुप हरु छन। जस्तो तरकारी ग्रुप, काण्ड ग्रुप, स्टोन्ड ब्वाइज ग्रुप, ल मस्ती गरौ ग्रुप आदि। ती ग्रुपगरुमा बस एक अर्कामा काण्ड(सेक्सभिडियो ) हरु शेयर हुन्छ। हजारौ युवा युवतिहरु यस्मा लिप्त भएको पाइन्छ र आफ्नो समय बिताइ रहेका छन।
होला यसरी झुम्ने उनिहरुको स्वतन्त्रता र यस्मा रम्ने चाहना। तर त्यस्ले हाम्रो समाजले तोकेको परिधी भने अवश्य नाघ्दै छ। हाम्रो समाज यौनको बिषयमा यति सम्म पनि खुलेको छैन कि जहा चुम्बन सम्म खुलेर गर्न सकियोस। अब नग्न नाग नागिन नृत्य त धेरै परको कुरा भएनन र?
याे पनि पढ्नुस सेनाको आधुनिकीकरण
हाम्रो समाजमा सेक्सलाइ बिश्वासको पर्यायवाची मानिन्छ, जिम्मेवारि बोध मानिन्छ। यौनलाइ सम्बन्धको अन्तिम बिन्दु मानिन्छ। यस्लाइ लाज र इज्जत मानिन्छ र यस्को लागि समाजले तय गरेको क्राइटएरिया पास गरेको हुनु पर्छ, जस्तो कि बिवाह।
मुलतः सेक्स, बिवाह बन्धनमा बाधी सके पछि गर्ने कुरा भनेर मानिन्छ तर अहिले प्रेमी प्रेमिका भएर र राजिखुशी भएमा गर्ने गरेको कुरा यथेष्ट देख्न नै पाइन्छ। किनकी यी कुराहरु चर्चामा आइ नै हाल्छन, टेक्नोलोजीको दुरुपयोगले। यस्तो पवित्र मानिएको यौनलाइ बन्द कोठामा दुई जना बिचमा सिमित हुनु पर्छ भनेर मान्ने हाम्रो समाजले कसरी लाखौ हजारौले देख्ने गरि गरिएको यौन स्विकार्ला त?
नग्नवादको चर्चा चलोरहेको हालको बिश्वमा यी कुराहरु जसरी पनि परिभाषित गर्न सकिएला तर हामिले आफुलाइ समाजमा स्थापित गराइ राख्न समाजको सिमालाइ हदै सम्म भने तोड्न हुदैन।
मुख्य गरि अहिले सहरीकरणको मातमा लागेका युवायुवतिहरु स्कुल कलेजको शौचालयमा होस या त पिक्नी जादा, बा आमा नभएको बेला आफ्नै घरमा होस या त एकान्त पार्किङ्ग मा , सुन्दर बगैचामा होस या त होटलको कोठामा; मोबाइल या त क्यामरा सेट गरेर सेक्स गर्दै गरेको भिडियो बनाउन थाली हाल्छन।
हाम्रो समाज अहिले यति साघुरिएको छ प्रविधिको कारणले कि , ती युवा युवतिका प्राय जसो बा आमा पनि फेसबुक, युट्युब आदिको ज्ञाता छन। ती युवा युवतिलाइ चिन्ने कोहि न कोहि त अवश्य छ जस्ले सामाजिक संजाल मजाले चलाउछ। अब त्यो समाजमा ती बा आमाले आफ्नो छोरा छोरिको नग्न भिडियो हरु हेर्दा,यौनको बिषयमा यति सिमित रहेको हाम्रो समाजमा कसरी मुल्यांकन गर्लान त। कसरी स्विकार्न सक्लान त?
बिदेशिएका युवा युवतिहरुले मनोरञ्जनको नाममा उत्तेजक नृत्य हरु,आफ्नो यौनाङ्ग खेलाउदै गरेको भिडियो हरु र सेक्स कै भिडियो हरु खिची रहदा भोलि त्यो बाहिर आउला कि भन्ने भय कत्ति पनि राख्दैनन।
अस्ट्रेलियन ईन्स्टिच्युट अफ कृमिनोलोजिका अनुसार, धेरै दक्षिण एसिया राष्ट्रका युवती हरु आफ्नो कलेज फि तिर्न बेश्यवृत्तिमा लागेको जनाएको छ ।
आफू र आफ्नो परिवारको सपना साकार गर्न बिदेशिएको भनेर भनी रहने ती युवा युवती परदेशमा त्यो देशको कानुन बिपरित यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुदा भोलि के पर्ला भनी सोच्न सकि रहेका छैनन । भोलि समाजले मलाइ के भन्ला? म कसरी समाजमा स्विकार्य हौला, मेरो बा आमा परिवारले कति ताना सुन्न पर्ला? यी कुरा हरुको हेक्का उनिहरुले पटक्कै राखिरहेका छैनन।
सेक्स केही मिनेटको क्रियाकलाप होला तर रेकर्डेड सेक्स जिवनकाल सम्म रहिरहने यस्तो प्रमाण हो जस्ले हाम्रो समाजमा जीवन नर्क तुल्य बनाउछ । हुन त सेक्सटेप सबै पारस्परिक सहमतिमा बन्छन भन्ने छैन (जस्तो एक अमेरिका गएकि परियारको कथा हेरौ, उनको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो र पछि उनले अदालतमा मुद्दा जिति क्षति पुर्ति पाइन)। अहिले हामी ग्लोबलाइजेसनको युगमा छौ, अध्ययन गर्न धन कमाउन धेरै बिदेशिदै गरेको चित्र सफा देखिन्छ, यो ट्रेन्ड पनि हुन थालेको छ र फेसन पनि।
याे पनि पढ्नुस देश विकासको मूलबाटो
आर्थिक रुपले दरिलो नभए पनि पढ्न अमेरिकी अस्ट्रेलियन सहर जाने रहर बढ्दो छ। त्यहाँ पुगेपछि कसरी जीवन धानिन्छ त । अस्ट्रेलियन ईन्स्टिच्युट अफ कृमिनोलोजिका अनुसार, धेरै दक्षिण एसिया राष्ट्रका युवती हरु आफ्नो कलेज फि तिर्न बेश्यवृत्तिमा लागेको जनाएको छ ।
डरमर्दो छ, हामी पनि साउथ एसियन राश्ट्र नै हो। यदि यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहेमा, अर्को ब्याक्तिले त्यो क्षणको भिडियो नबनाउला भन्न सकिन्न। त्यो पनि त सेक्सटेप भयो। अब त्यो टेप बाहिर आउदा मेरो छोराछोरी पढ्दै छन भन्ने बा आमालाइ के बित्छ त ?
सेक्स्टेपलाई भाइरल बनाएर चर्चा कमाउने हतियार बनाइहाल्ने गरिको हाम्रो समाज भइ सकेको छैन । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा युवा युवतिहरु सजग रहन जरुरी छ ।ओशोको दर्शन मान्ने नाममा त्यस्लाई गलत व्याख्या गरेर जनावर झै खुल्ला यौन गर्न उत्तेजित भई हाल्ने समाज बिश्वमा सायद छैन नै होला,भए पनि हाम्रो समाज युगौ युग दुर छ त्यो अवस्था बाट।
मेरो लेखाइको आशय यो हैन कि, यौन समाजले तोके झै बिवाह पछि नै हुन पर्छ साथै यो पनि हैन कि यौनमा लगाम लगाइनु पर्छ। यो भन्दै गर्दा यस्लाइ पशुतुल्य खुल्ला बनाउन पर्छ पनि मैले भन्न खोजेको हैन। हुन त nudism (नग्नवाद) को चर्चा चलोरहेको हालको बिश्वमा यी कुराहरु जसरी पनि परिभाषित गर्न सकिएला तर हामिले आफुलाइ समाजमा स्थापित गराइ राख्न समाजको सिमालाइ हदै सम्म भने तोड्न हुदैन।
सेक्स्टेपलाई भाइरल बनाएर चर्चा कमाउने हतियार बनाइहाल्ने गरिको हाम्रो समाज भइ सकेको छैन । त्यसैले यस्ता कुरा हरुमा युवा युवतिहरु सजग रहन जरुरी छ । ओशोको दर्शन मान्ने नाममा त्यस्लाइ गलत व्याख्या गरेर जनावर झै खुल्ला यौन गर्न उत्तेजित भइ हाल्ने समाज बिश्वमा सायद छैन नै होला,भए पनि हाम्रो समाज युगौ युग दुर छ त्यो अवस्था बाट।
यौन आवश्यकता हो तर यसलाई चलचित्र बनाएर आफू र आफ्नो परिवारको जीवन बर्वाद नबनाउनु नै बुद्दिमानी हुन्छ। आधुनिकीकरण; नाङ्गो शरीर र खुल्ला यौनले परिभाषित गर्दैन। आधुनिकीकरण त समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने सोचको बिकास गर्न सक्नु हो। यौनलाइ आवश्यकता मा नै सिमित राखौ यसलाई बर्वादिको कारण नबनाऔ।
ट्याग्स: article, निश्चल दाहाल।